Idilesi yewebhusayithi yethu yi-https: //apkshelf.com.
Yisiphi idatha esiyifumanayo kunye nesizathu sokuba siqokelele
Xa iindwendwe zishiya amagqabantshintshi kwindawo esiqokelela kuyo idatha eboniswe kwifom yezimvo, kunye nedilesi ye-IP yabatyeleli kunye nomtya womsebenzisi wesikhangeli ukunceda ukufumanisa ugaxekile.
Umtya ongenamagama owenziwe kwidilesi yakho ye-imeyile (ebizwa ngokuba yi-hash) inokunikezelwa kwinkonzo yeGravatar ukubona ukuba uyayisebenzisa. Umgaqo-nkqubo wobumfihlo wenkonzo yeGravatar ukhona apha: https://automattic.com/privacy/. Emva kokuvunywa kwamagqabaza akho, umfanekiso wakho wefayile ubonakala kuluntu kumxholo wakho.
Ukuba ulayishe imifanekiso kwiwebhusayithi, kufuneka ugweme ukulayisha imifanekiso eneenkcukacha zendawo edibeneyo (i-EXIF GPS) ifakiwe. Ababhenkethi kwiwebhsayithi banokukhuphela kwaye bakhuphe nayiphi na idatha yendawo kwimifanekiso kwiwebhusayithi.
Ukuba ushiya izimvo kwiziko lethu ungakhetha ukungena kwigama lakho, idilesi ye-imeyile kunye newebhusayithi kwi-cookies. Oku kukulungelelaniso ukuze ungagcwalisi kwakhona iinkcukacha zakho xa ushiya enye ingxelo. Ezi khukhi ziza kuqhubeka unyaka omnye.
Ukuba undwendwela iphepha lethu lokungena, siza kuseta ikuki yethutyana ukufumanisa ukuba isikhangeli sakho siyazamkela ikuki. Le cookie ayinayo idatha yobuqu kwaye iyalahlwa xa uvala isikhangeli sakho.
Xa ungena, siza kuseta iicookies ezininzi ukugcina ulwazi lwakho lokungena kunye nokukhetha kwakho kwesikrini. Iikuki zokungena zihlala iintsuku ezimbini, kunye nokhetho lwekuki lokugcina unyaka. Ukuba ukhetha "Ndikhumbule", ukungena kwakho kuya kuqhubeka iiveki ezimbini. Ukuba uphuma kwiakhawunti yakho, iikuki zokungena ziya kususwa.
Ukuba uhlela okanye ushicilele i-athikili, i-cookie eyongezelelweyo iya kugcinwa kwisiphequluli sakho. Le cookie ayifaki idatha yedatha kwaye ibonisa kuphela i-ID yesithuba kwinqaku oye walungisa. Iphela emva kwexesha le-1.
Amanqaku kule ndawo angabandakanya umxholo ohlanganisiweyo (umz. Iividiyo, imifanekiso, amanqaku, njl). Okufakiwe okuvela kwezinye iwebhusayithi kuziphatha ngendlela efana neyokuba umvakatye uye watyelela enye iwebhusayithi.
Ezi website zingakuqokelela idatha malunga nawe, sebenzisa ikhukhi, faka i-tracking eyongezelelweyo yenkampani yesithathu, kwaye uqaphele ukusebenzisana kwakho kunye nomxholo ohlanganisiweyo, kubandakanya ukulandelela ukusebenzisana kwakho kunye nomxholo odibeneyo ukuba unayo i-akhawunti kwaye ungene ngemvume kwiwebhsayithi.
Ukuba ushiya amazwana, izimvo kunye nemethadatha yayo zigcinwa ngonaphakade. Oku kunjalo sinako ukuqonda nokuvuma naziphi na izimvo zokulandelela ngokuzenzekelayo endaweni yokuzigcina kumgca wokumodareyitha.
Kubasebenzisi abhalisa kwiwebhsayithi yethu (ukuba kukho), sigcina ulwazi oluthile abanikezela kwingxelo yabo yomsebenzisi. Bonke abasebenzisi bangabona, bahlele, okanye basuse ulwazi lwabo lomntu kunini na (ngaphandle kokuba abanakuguqula igama lomsebenzisi). Abalawuli bewebhusayithi banokubona nokuhlela loo nkcazelo.
Nguwaphi amalungelo onayo ngaphezu kwedatha yakho
Ukuba une-akhawunti kule ndawo okanye ushiye izimvo, ungacela ukufumana ifayile yokuthumela idatha ethunyelwa ngaphandle, kubandakanya nayo nayiphi na idatha osinike yona. Unokucela kwakhona ukuba sicime nayiphi na idatha yobuqu esiyibambe ngawe. Oku akubandakanyi nayiphi na idatha esinyanzelekileyo ukuba siyigcine yolawulo, yezomthetho, okanye yezokhuseleko.
Amagqabaza evakatyekayo angatshekishwa ngesevisi yokufumanisa i-spam.
Amalungelo okushicilela © 2004-2021 [APKShelf]